Tuner, nweta egwu YouTube, n'efu maka obere oge | Esi m mac
Tuner, nweta egwu YouTube, n'efu maka obere oge
Ọtụtụ bụ ndị ọrụ taa na-aga n'ihu na-ahụ ọrụ egwu egwu na-asọpụta dị n'ahịa ndị dị oke ọnụ maka mkpa ha. N'ezie, ụdị ndị ọrụ a abụghị ndị hụrụ egwu n'anya ma mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịnọdụ ala gere egwu kachasị amasị ha. Dịka iwu n'ozuzu, nke kachasị bụ na ụdị ndị ọrụ a ga-ebudata egwu ozugbo na ngwaọrụ ha. E nwere ụdị ndị ọzọ na-ahọrọ ige egwu naanị mgbe ha nọ n'ihu kọmputa na-arụ ọrụ na achọghị ịkwụ ụgwọ ọrụ kwa ọnwa, n'agbanyeghị ihe kpatara ya. Maka ụdị onye ọrụ anyị nwere Tuner - Ahụmahụ YouTube Music.
Tuner Experience YouTube Music, na-enye anyị ohere ige egwu egwu YouTube anyị kachasị amasị anyị, mepụta listi ọkpụkpọ na-enweghị akaụntụ Google ... ọtụtụ nde mmadụ na-eji YouTube ege egwu egwu kachasị amasị ha ma ọ bụrụ na anyị emee ya na kọmputa anyị kwesịrị nwere mpio meghere maka ya. Mana ekele maka ngwa a dị mfe, nke nwere ihe karịrị 4 MB, anyị nwere ike ịnụ ụtọ YouTube na egwu ya na-enweghị nsogbu. Tuner nwere ọnụahịa oge niile na Mac App Store nke euro 5,99, ma obere oge anyị nwere ike ibudata ya n'efu.
Ọzọ ekwe omume na nke a ngwa awade anyị bụ ekwe omume ọ bụghị nanị na-ege ntị anyị mmasị videos na ndabere, ma ọ na-enye anyị ohere ngosi vidiyo na windo na-ese n'elu mmiri, nke mere na ka anyị na-eme ihe ndị ọzọ, anyị nwere ike ịlele ya. N'ịbụ ọrụ na-enweta ozi na ọdịnaya nke ndị ọzọ, mgbasa ozi ọkọlọtọ na-egosi na ọtụtụ vidiyo, ihe agaghị echegbu anyị ga-abụ mgbasa ozi ndị gara aga na-erubiga YouTube n'oge na-adịbeghị anya na nke ahụ na-eme ihe n'eziokwu na-amalite na-ewe ezigbo iwe karịsịa mgbe ha kwụsịrị. a playback fọrọ nke nta ka ọ bụla nkeji ise.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Tuner, nweta egwu YouTube, n'efu maka obere oge
Spotify na-emelite ma na-akwado Touch Bar nke ọhụrụ Macbook Pro
Minecraft maka Apple TV, Desktọpụ Mac maka 2017, Apple Watch emegharịrị, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac